Global Voices teny Malagasy » HORONANTSARY: Lehilahy Roa Avy Amina Tontolo Roa Samihafa, Nanohitra Tsifahamarinana Ary Nandresy · Global Voices teny Malagasy » Print
HORONANTSARY: Lehilahy Roa Avy Amina Tontolo Roa Samihafa, Nanohitra Tsifahamarinana Ary Nandresy
Voadika ny 29 Mey 2013 23:19 GMT 1	 · Mpanoratra Silvia Viñas Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Afrika Atsimo, Bolivia, Fanoherana, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
I Mkhuseli “Khusta” Jack dia teratany Afrikanina Tatsimo ary i Oscar Olivera kosa dia teratany Bolivianina, avy amina kontinenta samihafa izy ireo kanefa mitovy ny tantarany: samy nisedra tsifahamarinana mitongilahila ary nandresy. Tamin'ny 1985, nanampy nanatsahatra ny fanakavaham-bolonkoditra i Khusa tamin'ny alalan'ny fikarakarana ny fandavan'ny mpanjifa tsy hividy tany Port Elizabeth, Afrika Atsimo.
Dimy ambin'ny folo taona taty aoriana, tamin'ny 2000, nitàna andraikira lehibe tamina fihetseham-panoherana izay nanatsahatra ny figiazana ny rano tany Cochabamba, Bolivia i Olivera.
Ireo tolona roa ireo, samihafa vanim-potoana sy kontinenta, dia porofon'ny herin'ny fikarakaràna ara-stratejika sy ny fihetsiketseham-bahoaka tsy misy herisetra.
Tamin'ity taona ity, nihaona tany Meksiko tany amin'ny Sekolin'ny Fanaovan-gazety Voamarina i Khusta sy Olivera. Namokatra horonantsary milaza ny tantaran'izy ireo ny vondrona mpianatra sy mpampianatra tao amin'ny sekoly, izay nozarain'i Narco News TV  vao haingana.
Manome  antsipiriany bebe kokoa momba ireo tolona roa ireo i Rumbidzai Dube , mpisolo vava sy mpiaro ny zon'ny olom-belona izay nanampy tamin'ny fanaovana ilay horonantsary:
Tanora sady mavitrika, nitarika fandavana ara-toekarena tsy hanjifa ireo orinasa an'ny fotsy hoditra any Port Elizabeth i Khusta mba hanamafisana ny fitakian'ireo mainty hoditra ny mba hahazo fikarakarana tsara kokoa – fikarakaran'ny governemanta any Afrika Atsimo ny olombelona.
Any amin'ireo haavo goavamben'i Cochabamba, any Bolivia, tamin'ny 2000, Oscar Olivera niaraka tamina olon-kafa dia nitarika tolona izay nanjary fantatra tamin'ny anarana hoe adin'ny rano Cochabamba, tolona manohitra ny figiazana ny rano any Bolivia, tafiditra ao anatin'izany ny ranon'orana.
Samy nihetsiketsika ireo lehilahy roa ireo, namory vahoaka mba hijoro, naharitra izy ireo. Nka risika ry zareo, hetsika sahisahy ny azy, aina raha teo no lalaovina. Nefa inona no mba safidy nananany? Safidy ve ny fianana tsy misy rano? Safidy ve ny fiainana tsy misy fahalalahana, tsy misy maha-olona sy fahamarinana? Hany ka nisorona izy ireo, tsy ny fotoanany sy ny heriny ihany, fa ny fiainany koa, ary dia nandresy izy ireo.
Nihaona tamin'ny Khusta sy Olivera ihany koa ny mpanao gazety Arzu Geybulla . Nosoratany  tao amin'ny blaoginy fa ireo olona ireo dia ”faka tahaka, tahaka ny tantarany.”
Nandefa hafatra fohy entina hampahery ny mpamaky mba hanaparitaka ilay horonantsary ny blaogy Meksikanina Hazme el Chingado Favor  [es]:
Tsy fampihomehezana tahaka ireo horonantsary hafa nataonay ity, fa mino lalina ny hafatra fonosiny izahay ka mazoto manaparitaka izany amin'izao tontolo izao sady te hangataka ny fanohananareo amin'ny fizaranana azy io. Tsy mila fanazavàna intsony ny lohahevitr'io horonantsary io.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/05/30/48945/
 Sekolin'ny Fanaovan-gazety Voamarina : http://en.wikipedia.org/wiki/Authentic_Journalism
 Narco News TV: http://www.narconews.com/nntv/video.php?vid=56
 Rumbidzai Dube: https://twitter.com/Dubbydacious
 Arzu Geybulla: http://www.arzugeybulla.com/
 Hazme el Chingado Favor: http://hazmeelchingadofavor.com/2013/05/16/dos-historias-un-relato/